Puntland oo shaqo abuur u samaysay 10 kun oo qof (dhegayso) – Radio Daljir
Juunyo 16, 2019 11:10 b 1
Dowladda Puntland ayaa shaqo abuur usamaysay in kabadan 10 kun oo qof oo ubadan dhalinyarada ka soo baxday Jaamacadaha ku yaala Puntland kuwaas oo loo qaybinay wasaaradaha kala fuwan ee dowladda.
Shaqaalahan ayaa ka howlgali doona inta badan wasaarada deegaanka iyo isbadalka cimilada Puntland, si looga hortago xaalufka deegaanka iyo abaaraha soo noqnoqda iyadoo deegaanada Puntland laga hirgalinayo biyo xireeno si looga baaqsado abaaraha.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni ayaa shalay arintan ku soo qaatay qudbadii uu ka jeediyay kalfadhigii 44 aad ee baarlamaanka Puntland.
Hadaba sidee lagu soo xulay dhalinyaradan? Su,aalahan iyo kuwo kale waxaan hordhignay wasiirka deegaanka Puntland Ismaaciil Diiriye Gamadiid, waxaan waraystay wasiirka isagoo ku sugan magalaada Muqdisho wariye Xasan Heykal.